Football Khabar » शानदार एमबाप्पे : २० वर्षकै उमेरमा शतक !
शानदार एमबाप्पे : २० वर्षकै उमेरमा शतक !
फ्रेन्च क्लब पिएसजीका युवा परवार्ड केलियन एमबाप्पेले क्लब फुटबलमा शतक पूरा गरेका छन् । गत राति च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत समूह चरणको अतिम खेलमा आफ्नो घरमा गालातासरेलाई ५–० ले हराउनेक्रममा १ गोल गरेसँगै एमबाप्पेले क्लब फुटबलमा गरेको कूल गोल संख्या १०० पुगेको छ ।
फ्रान्सको राष्ट्रिय टोलीका खेलाडी एमबाप्पेले विभिन्न क्लबबाट सबैखाले प्रतियोगितामा गरेको कूल गोल १०० पुगेको हो । जसमा उनले पूर्वक्लब मोनाकोका लागि २७ गोलसहित पिएसजीका लागि गरेको ७३ गोल सामेल छ ।
एमबाप्पेले मात्रै २० वर्षको उमेरमा क्लब फुटबलमा १०० गोल पूरा गरेका हुन् । यो निकै शानदार रेकर्ड हो । युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा भने एमबाप्पेले हालसम्म १९ गोल गरेका छन् भने ११ गोलमा असिस्ट गरेका छन् ।
एमबाप्पे अहिले क्लब पिएसजीको इतिहासमै सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा आठौं नम्बरमा छन् । यता, एमबाप्पेले हालसम्म फ्रान्सका लागि कूल ३३ खेलबाट १३ गोल गरेका छन् । उनले फ्रान्सका लागि सन् २०१७ बाट खेल्न थालेका हुन् ।
प्रकाशित मिति २६ मंसिर २०७६, बिहीबार ११:५५